Iifom ezahlukeneyo kunye neentlobo zeeNtlwathwa
Izakhiwo ezine ezisisiseko okanye iintlobo zeeNqamlezo zazisetyenziselwa ukubethela izibetho
Ukwabethelwa kwaba yindlela yokudala yasetyenziswa apho ixhoba kunye neenyawo ziboshwe kwaye zibethelwe esiphambanweni . Kwakukho intlonelo eqinileyo yentlalo ehlanganiswe nokubethelwa , ukuhlawulwa kwabarhwebi, imikhosi ekuthinjweni, amakhoboka kunye nezobugebengu ezimbi kakhulu. Inkcazo ecacileyo yeembambano zimbalwa, mhlawumbi ngenxa yokuba iimbali-mlando zehlabathi azikwazi ukunyamezela ukuchaza iziganeko ezibuhlungu zolu hlobo olubi. Nangona kunjalo, ukufunyanwa kwezinto zakudala ezivela kwiPalestina yokuqala kwenzelwa ukukhanya okukhulu ngale ndlela yokuqala yokugwetywa.
Izakhiwo ezine ezisisiseko okanye iintlobo zomnqamlezo zazisetyenziselwa ukubethelela izibethelo:
I-Crux Simplex yayisisigxina esisodwa okanye isigxina apho ixhoba liboshwe okanye libethelwe. Yayisiphambano esilula, esona siqhelo esasisetyenziselwa ukuhlawuliswa kwezigwenxa. Izandla kunye neenyawo zexhoba ziboshwe kwaye zikhonjiswe kwisibonda zisebenzisa iisilumko esisodwa kwiimbumba zombini kunye nesilumko esisodwa kumabini amaqhosha, kunye nepenki yokhuni ehlanganiswe kwisibonda njengento yokuhamba ngeenyawo. Ngokuqhelekileyo, ngezinye iinkalo, imilenze yexhoba yayiyophulwa, iphosakele ngokufa ngokuxhatshazwa.
I-Crux Commissa yayisakhiwo esikhulu esakhiwa yiT , esaziwa ngokuba ngumnqamlezo weSt. Anthony okanye i-Tau Cross, ebizwa ngegama lesiGrike ("Tau") elifana nalo. Igosa elincinane le-Crux Commissa okanye "umnqamlezo oluxhunyiwe" lixhunywe phezulu kwintsika. Lo mnqamlezo wawufana nesimo kunye nomsebenzi kwiCroxx Immissa.
I-Crux Decussata yayingu -cross-shaped cross , ebizwa ngokuba ngumnqamlezo waseSt. Andrew. I-Crux Decussata yabizwa ngegama elithi "decussis" yamaRoma, okanye i-Roman numeral ten. Kukholelwa ukuba uMpostile uAndreya wabethelelwa emnqamlezweni we-X ngesicelo sakhe. Njengoko isithethe esitshoyo, wayeziva engafanelekanga ukufa ngendlela efanayo nomnqamlezo apho iNkosi yakhe, uYesu Kristu , yayifile.
U-Crux Immissa wayengumzekelo ophantsi oqhelekileyo , isakhiwo esakhiwe yiT enathi iNkosi, uYesu Kristu wabethelwe esiphambanweni ngokweSibhalo kunye nesiko. Immissa kuthetha "ukufakwa." Lo mnqamlezo wawunomxholo wesigxina kunye nesigxina esinqamlekileyo (esibizwa nge- patibulum ) efakwe kwisiqendu esiphezulu. Ebizwa ngokuba ngumnqamlezo wesiLatini , i-Crux Immissa ibe yimiqondiso ebalulekileyo kakhulu yobuKristu namhlanje.
Maxa wambi amaxhoba ayebethelwe esiphambanweni. Izazi-mlando zibika ukuba ngesicelo sakhe, uMpostile uPetros wabethelelwa ngentloko yakhe emhlabathini ngenxa yokuba wayengakufanelanga ukufa ngendlela efanayo neNkosi yakhe, uYesu Kristu.
Ukukhohlisa okungapheliyo: Ukujongana nale Nkqubo enzima
I-80s Iingoma eziphezulu zeClash - Volume 1
Indlela Yokulungisa Ididi Yokudoba Ephukile